गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्न-नागीडाँडाको एयरपोर्ट किन बिगारेउ श्रीमान माधव नेपाल ? – Ramro Sandesh गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्न-नागीडाँडाको एयरपोर्ट किन बिगारेउ श्रीमान माधव नेपाल ? – Ramro Sandesh
बनेपा, पुर्व मन्त्री, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य एवं जिल्ला ईञ्चार्ज गोकुल बाँस्कोटाले माधव नेपाल बिकास बिरोधी भएको बताएका छन । शुक्रबार अखिल नेपाल महिला संघ बनेपाको नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता बाँस्कोटाले बनेपाको नाँगीडाँडामा बन्न लागेको आन्तरिक बिमानस्थल माधव नेपालकै कारण रोकिएको बताएका हुन ।
नेता बाँस्कोटाले भोली एकिकृत समाजबादीको कार्यक्रममा बनेपा आउदै गरेका नेता माधव नेपालप्रति इंकित गर्दै भने– बनेपाको बिकास रोकेर बनेपामै कुन मुख लिएर आएदै छन । भोलि आएर मैलाई गाली गर्नु बाहेक अरु केहि गर्न नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले भने–हाम्रो प्रश्न छ नागीडाँडाको एयरपोर्ट किन बिगारेउ श्रीमान माधव नेपाल ? बिकास बिरोधि भएरै एमाले छोडेका हुन, अरुपनि बिकास बिरोधिहरुले छोडे हुन्छ । बाँस्कोटाले भने म सेक्यूरिटी प्रिन्टीङको हिसाब दिन्छु माधव नेपाललेपनि बालुवाटारको हिसाव दिनु पर्छ ।
अदालत जनताभन्दा माथि नहुने भन्दै आफु जनताको अदालतमा परिक्षा दिन तयार रहेको र सहजै उतिर्णपनि हुने बाँस्कोटाको भनाई थियो । गठबन्धनहरु लोकतन्त्रको हुर्मत लिन मात्रै बनेको भन्दै उनले ‘प्रचण्ड’लाई आत्महत्या नगर्न आग्रह गर्दै भने चुनावसम्म आत्महत्या नगर्नु तेतिखेर जनताले बिदा दिन्छन अनि आराम गर्नृहोला । सर्वहाराको नेता होईन बिनोद चौधरीको मामुली कार्यकर्ता बनेर धेरै नटिकिने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बाँस्कोटाले महिला अधिकार जागरण बाट स्थापित हुने र ३३ प्रतिशत नखोशिने अधिकार पाएकोले अब अधिकारको लडाई होईन कार्यान्वयन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नगर अध्यक्ष राजन कुमारी बैद्यको अध्यक्षता, सरिता रायमाझीको सञ्चालन र रेखा सापकोटा दाहालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा पुर्व सांसद शिला कतिला, प्रदेश सभा सदस्य गोमा भुर्तेल, अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय सदस्य अम्बु भवानी कार्की, एमाले जिल्ला अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु, एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य हरिशरण दाहाल, बनेपा नगर सह–इञ्चार्ज कुमार तिमल्सिना, बनेपा नगर अध्यक्ष लक्ष्मिनरसिंह बादे, अखिल नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष कमला काफ्लेलगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।